Munaasabadii Midnimada ee Ku Gaareen xarakada shabaabul Mujaahdiin Iyo Xisbul Islaam Dhagayso khudbadii munaasabada Daawo Sawirada
Posted on Diseembar 23, 2010 by halganka
Munaasabaddii maanta ka dhacay Masjidka Nasru-diin ee lagu shaacinayay Midnimadii ay wada gaareen Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab iyo Xisbul islaami. Sii akhri →
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo soo bandhigtay Meydka Askari Ugaandheys ah oo lagu dilay dagaaladii Xalay ka dhacay Wadada Makka Al-Mukarama.
Posted on Oktoobar 24, 2010 by halganka
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa maanta Saxaafadda gudaha iyo dibadda waxay usoo bandhigeen Meydka Askari Ugaandheys ah,kaasi oo habeenkii xalay ay toogteen Ciidamo ka tirsan Guutada Mustafa Abul Yaziid ee dhawaan lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho. Sii akhri →
Shabaabul Mujaahidiin oo cagta mariyey maleeshiyaadkii Qabuura caabudka ahaa iyo AMISOM oo la’ cid ka xigsata dhanka Shabaabul Mujaahidiin.
Posted on Agoosto 27, 2010 by halganka
Dagaaladii kululaa ee galabta ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa u suura gashay Mujaahidiinta Shababul Mujaahidiin in ay cagta mariyaan difaacyadii Qabuura galeenka halka dhanka kalena ay la wareegeen Mujaahidiintu dhammaan goobihii ay ku sugnaayeen Qabuura galeenka ku qaraabta magaca sharafta badan ee Ahlu Sunnah Wal Jamaacah. Sii akhri →
Mujaahidiinta oo gacanta ku dhigey Fariisimo Muhiim ah cadowgana dhabar jab ku ah.
Waxaa saaka xaalad daganaansho ah laga dareemayaa fariisimihii Shaley galab ilaa habeenimadii xaley Mujaidiintu gacanta ku dhigeen, Mujaahidiinta Liwaaga Cali Bin Abu-Daalib ee ka howl-gala Wilaayada Islaamiga ee banaadir ayaa dagaalo adag waxay la geleen Ciikadamada Kirishtaanka ah ee Yugaandh oo difaac ka sameystay Hotel Juba, Mujaahidiinta ayaa si geesinomo leh waxey gudaha ugu daateen difaacyada yugaandhiiska iyo kuwa Maleeshiyada ridada ee gabaadka u ah. Sii akhri →
Dagaallo ay ku hoobteen maleeshiyaadka Faroole oo xalay ka dhacay Galgala iyo hub Farabadan oo ay furteen xoogaga ATAM (Warbixin).
Dagaallo culus oo u dhexeeyay Ciidamada Deegaanka Galgala iyo Maleehshiyaadka Cabdi Raxmaan Faroole ayaa xalay markale ka dhacay agagaarka degmada Galgala ee Gobalka Bari oo maalmihii lasoo dhaafay dagaallo ka socdeen. Sii akhri →
JEDDAH:- Sheekh Cumar-Faaruuq oo u warramayey idaacadda codka Maraykanka, VOA, qaybteeda Afsoomaliga ayaa shaaca ka qaaday in aan bisha Ramaddaan la jihaadi karin. Wariye C/Casiis Xuseen Cismaan ayaa weydiiyey su’aal ahayd in dagaalka lalaba jibaaro ama la badiyo weerarada dhan ka ah Ciidamada Amisom sida ay sheegayaan kooxaxa Muqdishu ka dagaalamaya, ma diinbaa Sheekh Cumar? Sii akhri →
Zenawi: UWSLF Waxay Ahaan Jirey Argagaxiso Oo Hadda Nabadda Qaatay Markay Gobolka Ku Noolaan Kari Waayeen (Dhagayso SomaliTalk.com)
Zenawi waxa uu markale si qeexan u sheegay, shir jaraa’id oo uu August 11, 2010 ku qabtay Addis Ababa, in kooxaha heshiiska la gashay ay yihiin “hadda kuwa ugu taag daran” oo ay heshiiska ogolaadeen kaddib markii “kooxahaasi ay ku badbaadi waayeen degaanka. Sii akhri →
Bogga Xiga →